Saameynta Xanuunada Maskaxda ee Soomaalida Qurbaha
Khabiir caafimaad oo sharxeysa habka maskaxda bani'aadamku u shaqeyso
Maanta oo kale, sanad walba, adduunka waxaa looga dabbaal-degaa maalinta caafimaadka maanka. Sida ay sheegtay hay’adda caafimaadka Dunida ee WHO, ku dhowaad 1 bilyan oo qof ayaa la nool cudurrada maskaxda.
Waxa ay intaasi ku dartay in 3 milyan oo qof ay sanad kasta u dhintaan isticmaalka halista ah ee khamriga, iyadoo uu 40-kii ilbiriqsiba uu hal qof is-dilo. Haatanna, balaayiin dad ah oo adduunka ku nool ayaa waxaa saameeyay cudurka COVID-19, kaas oo saameyn dheeraad ah ku leh caafimaadka maskaxda ee dadka.
Haddaba, qaabka xanuunnadan maskaxda ku dhaca ay u saameeyso bulshada Soomaalida iyo dadka reer galbeedka ma kala duwan yahiin? Waxaa warbixin arrintan ka hadleyso magaalada London noogu diyaariyay wariyaha VOA, Cabdixafid Cawil Ismaaciil.
Warixin: Xanuunada ku dhaca dhimirka